ट्रेडमार्क चोरलाई किन विभागले कारवाही गर्न सक्दैन ? – Janacharcha.com
» आर्थिक » ब्यानर अंक: 3887
ट्रेडमार्क चोरलाई किन विभागले कारवाही गर्न सक्दैन ?
Janacharcha.com बुधबार, चैत्र ०४, २०७७ मा प्रकाशित
कुनै पनि कम्पनीले अरु कम्पनीसँग लोगो र डिजाइन मिल्नेगरी ट्रेडमार्क प्रयोगमा ल्याउनु गरैकानुनी काम हो । तर नेपालका विभिन्न कम्पनीहरुले एकअर्काको ट्रेडमार्क चोरी गरिरहँदा पनि सरकारको अनुगमन नीति फितलो भएको कारण उत्पादकहरूको ट्रेडमार्क कपिराइटको अधिकार सुनिश्चित नभएको देखीन्छ ।
ट्रेडमार्क प्रयोग बारे अनुगमन तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय उद्योग विभाग समेत उक्त विषयमा मौन भईदिदा अहिले जथाभावी ट्रेडमार्क चोरी गर्नेले प्रसय पाएका छन् । अनुगमन गर्ने विषय त टाढै भयो, उत्पादकले ट्रेडमार्क चोरी भएको उजुर गर्दा समेत उद्योग विभागले चोरी गर्ने उद्योगविरुद्ध कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन् । विभागमा परेको उजुरको समयमै छिनोफानो नहुदा अहिले ट्रेडमार्क चोरी भएका उत्पादकहरु मार्कामा परिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय ट्रेडमार्क चोरीको विवादमा ‘हेल्लो’ र ‘सेल्लो’ नाम गरेको दुई फरक सूर्यमुखी तेल कम्पनीहरूको बीचमा व्यापकरूपमा युद्ध चलिरहेको छ । बागमती आयल इन्डस्ट्रिजले २०५९ सालदेखि ‘सेल्लो’ ट्रेडमार्क उद्योग विभागमा दर्ता गराई सूर्यमुखी तेलको उत्पादन गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ ‘हेल्लो’ ब्राण्ड भने २०७१ सालमा मात्र उद्योग विभागमा रजिस्टर भएको पाईएको छ । यो ट्रेडमार्क चोरीको मुद्दा उद्योग विभागमा पुगेको करिब दुई वर्ष बढी भईसक्दा समेत सरकारी पक्षबाट खासै ध्यान नदिँदा अर्को उद्योगले करोडौँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
सोही प्रकारको विवाद “भोला” र “मौका” दुई फरक गुड्का उत्पादक विच समेत देखिएको छ । मौका गुड्काले भोला गुड्काको डिजाईन डिट्टो मिल्ने गरी चोरी गरेको आरोप छ । भोला गुड्का श्रीराम टोब्याको उद्योगाले बुटवलबाट उत्पादन गरीरहेको छ भने मौका गुट्का नारायणराज प्रडक्ट कम्पनीले झापाबाट उत्पादन गरीरहेको छ । भोला गुड्काले पनि आफ्नो ट्रडमार्क चोरी गर्ने उद्योगहरुको विरुद्ध मुद्दा दायार गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
यस बाहेकपनि नेपालमा स्वेदशीकै थुप्रै कम्पनीहरुले एकआर्काको ट्रेडमार्क चोरी गरीरहेको तर सरकारको अनुगमन निति फितलो भएको कारण उत्पादकहरुको ट्रर्डमार्क कपीराईटको अधिकार सुनिश्चित नभएको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार एवं विराटनगरका उद्योगी मोतीलाल दुगडले समेत भारतीय चर्चित भुजियाकोे हुबहु नक्कल गरेर उपभोक्ता झुक्याइ रहेका पाईएको छ । दुगडले भारतीय “विकाजी” भूजियासँग डिजाईन र लोगो मेल खाने गरी नेपालमा “सेन्चुरी” ब्राण्डको भूजिया उत्पादन तथा विक्रि वितरण गर्दै आएको छ । हेर्दा उस्तै देखिने भएकाले पनि धेरै पटक झुकिने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । शक्तिको आडमा भारतीय विकाजी भूजियाको नक्कल गरी दुगडले सेन्चुरी ब्राण्डका विभिन्न प्रकारका बुजियाहरु नेपाली बजारमा बेचबिखन गरिरहेका छन् ।
ट्रेडमार्क कानुन अनुसार कुनैपनि उत्पादनको नक्कल गर्न पाइदैन । उद्योग राज्यमन्त्रि बनिसकेका दुगडले उद्योग विभागमा भएको सहज पहुचका कारण उनी कानुनबाट सहजै उम्कीने गरेका छन् ।
अब, उपोभोक्ताले नै चोर कम्पनीहरुको उत्पादनलाई बहिस्कार गरी कपीराईटको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनु जरुरी देखिएको छ ।